Burma Partnership » As Myanmar Approaches Historic Election, New Report Reveals Secret Jade Trade is Worth up to US$31 billion, and Controlled by Military Elites and Drug Lords
By Global Witness • October 23, 2015
As the country approachesageneral election on 8 November, the report, “Jade: Myanmar’s ‘Big State Secret’”, shows that the elites who have most to lose from an open and fair future also have access toamulti-billion dollar jade ‘slush fund’. This should sound loud alarm bells for reformist elements in the Myanmar government and its international partners, particularly the US.
New findings and analysis by Global Witness put the value of Myanmar’s jade production as high as US$31 billion in 2014 alone. This figure equates to nearly half of the entire country’s GDP, and over 46 times national spending on health, yet the local population sees little benefit.
The report reveals how the families of notorious figures including former dictator Than Shwe and ruling party bigwigs Minister Ohn Myint and Maung Maung Thein are major players in jade.
Elsewhere, US-sanctioned drug lord Wei Hsueh Kang playsadominant role throughaweb of front companies, while Myanmar’s army is helping itself toagigantic slice of the pie via its own conglomerates and an elaborate extortion racket run by officers in Kachin State.
“Myanmar’s jade business may be the biggest natural resource heist in modern history. Since 2011,arebranded government has told the world it is turning the page on the ruthless military rule, cronyism and human rights abuses of the past. But jade – the country’s most valuable natural resource andagemstone synonymous with glitz and glamour – revealsavery different reality,” said Global Witness analyst Juman Kubba.
“This massive, dirty business is still controlled byarogues’ gallery of former generals, US- sanctioned drug barons and men with guns. Hidden behind obscure companies and proxy owners, these elites cream off vast profits while local people suffer terrible abuses and see their natural inheritance ripped out from beneath their feet.”
The jade business is wreaking havoc on the people and environment of Kachin, where the stone is mined. Conditions around the mines are often fatally dangerous and drugs and prostitution are endemic, while those who stand in the way of the guns and machines face land grabs, intimidation and violence. The jade is worth equivalent to US$21,000 per year for each person in Kachin State, yet locals are systematically cut out of the business. The loss of livelihoods and massive environmental damage is stoking unrest and resentment inahighly volatile region.
Jade isasignificant driver of Myanmar’s most serious armed conflict, between the central government and the Kachin Independence Army / Kachin Independence Organisation (KIA/KIO). The industry generates funds for both sides inawar which has claimed thousands of lives and seen 100,000 people displaced since it reignited in 2011. This creates incentives for military commanders and hardliners in government to prolong the conflict and protect the ill-gotten assets they stand to lose if the jade business is run more openly and fairly. The report argues that the question of who manages and benefits from Kachin State’s jade must be addressed now and built intoacomprehensive peace agreement to end the conflict.
“While the situation uncovered in the report is dire, the opportunities for change are real and urgently need to be taken. Alongside their pursuit of peace negotiations, reformers in government last year signed Myanmar up to the Extractive Industries Transparency Initiative (EITI), an international scheme designed to stop corruption and abuse in the oil, gas and mining sectors. EITI offersacredible framework for change, but unless officials take urgent steps to implement its recommendations openly and fully in the jade business, the process risks beingasham,” said Juman Kubba.
Jade is alsoakey test of US foreign policy in Myanmar. The US hasapartnership on the extractive industries with Myanmar government and isakey supporter of EITI. It also has specific sanctions on the jade sector, imposed during the Than Shwe dictatorship to deny money and power to abusive members of the military junta. Yet this report shows that many of those same individuals dominate the jade business today, alongside other infamous figures who are subject to US sanctions for their involvement in the drugs trade.
Global Witness is arguing that the US and Myanmar’s other partners should benchmark the lifting of sanctions and future aid disbursements to reforms of the jade industry. These must
prioritise sharing control and benefits more equitably with Kachin State, and making the business accountable to the Myanmar public.
“Witharange of sanctions on individuals named in this report, andaleading role in the fledgling extractive industries reforms, the US is uniquely placed to help take the jade out of the hands of the military, cronies and drug lords. It must make thisapriority for its partnership with the new government that emerges from November’s elections,” said Juman Kubba.
London: Oliver Courtney +44 (0)7912 517147, ocourtney@globalwitness.org;
SE Asia: Juman Kubba +95 (0)99 7049 8535, jkubba@globalwitness.org; Mike Davis +959252240981, mdavis@globalwitness.org.
1) The report will be available at www.globalwitness.org/myanmarjade from 23 October 2015. For advance embargoed copies please contact ocourtney@globalwitness.org
2) The basis for Global Witness’ US$31 billion estimate of Myanmar’s jade sector in
2014 is laid out in Appendix 1 to the report. In summary, the calculation is based on:
• Myanmar government data on jade production in 2014.
• Estimates for the average price of each grade of jade, based onadetailed breakdown of sales at the 2014 Myanmar Gems Emporium (the major official sales event aimed at international buyers in that year), and sales information foradomestic sale of utility (low quality) jade in October 2014.
• Estimates of the proportion of jade production which is ‘imperial grade’ (high quality), ‘commercial grade’ (medium quality) and ‘utility jade’ (low quality), taken from the report published by Harvard Ash Center/Proximity Designs in 2013.
The US$31 billion figure is an estimate of the value of official jade production only. It does not take account of any jade which is not officially recorded at the jade mine sites.
3) Global Witness has also produced an alternative estimate of the value of jade production in 2014, based on Chinese trade data. Chinese government import data for 2014 indicates that the category of gemstone imports from Myanmar that covers – and overwhelmingly comprises – jade was worth US$12.3 billion However, this accounts for less than one-third of total jade production in 2014; the remainder is not reflected in official jade imports to China, despite China being the place where almost all Myanmar’s jade ends up. If one calculates an average price per kilogram of jade imports as indicated by Chinese 2014 import data and combines it with Myanmar government production figures for the same year, this produces as estimate of almost US$38 billion; again suggesting that the value of the jade sector was above US$30 billion in 2014.
Download this press release in Chinese here.
သမိုင်းဝင်မည့်ရွေးကောက်ပွဲဆီနီးကပ်လာသောမြန်မာနိုင်ငံတွင်လျှို့ဝှက်ကျောက်စိမ်း လုပ် ငန်းမှာ ဒေါ်လာ ၃၁ ဘီလျံတန်ဖိုးရှိကြောင်း နှင့် ယင်းကိုစစ်တပ်ရေပေါ်ဆီများနှင့် မူးယစ်ရာဇာများက ထိန်းချုပ်ထားကြောင်း အစီရင်ခံစာသစ်ကဖော်ထုတ်ပြီ
မြန်မာနိုင်ငံ၏ ကြီးမားကျယ်ပြန့်သော ကျောက်စိမ်းလုပ်ငန်းကို စစ်တပ် ရေပေါ်ဆီလူတန်းစားများ၊ မူးယစ်ရာဇာများနှင့် စစ်အစိုးရလက်ထက် အမှောင်ဆုံးနေ့များနှင့် ဆက်စပ်နေသည့် ခရိုနီကုမ္ပဏီများက တိတ်တဆိတ် ထိန်းချုပ်ထားကြာင်း Global Witness ၏ ၁၂ လကြာ အပြင်းအထန် စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများက ယနေ့ ဖော်ထုတ်လိုက်ပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် နိုဝင်ဘာလ ၈ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပမည့် အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ နီးကပ်လာချိန်တွင်‘‘ကျောက်စိမ်း -­ မြန်မာနိုင်ငံ၏ နိုင်ငံတော်လျှို့ဝှက်ချက်ကြီး’’ ဆိုသည့် ဤအစီရင်ခံစာသည် ပွင့်လင်းမျှတသော အနာဂတ်တွင် အများဆုံး ဆုံးရှုံးရန်ရှိသည့် ရေပေါ်ဆီများက ဒေါ်လာသန်း ထောင်နှင့်ချီတန်သော တရားမ၀င်ကိစ္စများအတွက်သုံးရန်ထားသည့် ရံပုံငွေများကို လက်လှမ်းမီ ရရှိနေကြသည်ကို ဖော်ပြထားပါသည်။ယင်းသည် မြန်မာအစိုးရတွင်းက ပြုပြင်ပြောင်းလဲလို သူများနှင့်မြန်မာအစိုးရ၏ နိုင်ငံတကာ လုပ်ငန်းဖက်များ၊ အထူးသဖြင့် အမေရိကန်အနေဖြင့် အချက်ပေးခေါင်းလောင်းသံတစ်ခု ဖြစ်သင့်ပါသည်။
Global Witness မှ တွေ့ရှိချက် အသစ်များနှင့် လေ့လာသုံးသပ်ချက်အရ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ကျောက်စိမ်း ထုတ်လုပ်မှုသည် ၂၀၁၄ ခုနှစ် တစ်နှစ်တည်းမှာပင်လျှင် အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၃၁ ဘီလျံထိ များပြားကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။ ယင်းကိန်းဂဏန်းသည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပြည်တွင်း အသားတင် ကုန်ထုတ်လုပ်မှု တန်ဖိုး GDP ၏ တစ်ဝက်နီးပါး ရှိပြီး ကျန်းမာရေးအသုံးစရိတ်၏ ၄၆ ဆ ရှိပါသည်။ သို့သော် ဒေသခံပြည်သူများမှာ အကျိုးကျေးဇူးများ သိပ်မခံစားရပါ။
အစီရင်ခံစာက ဖော်ပြသည်မှာ အာဏာရှင်ဟောင်း ဦးသန်းရွှေ၊ အာဏာရပါတီမှ ထိပ်ပိုင်း ခေါင်းဆောင်များဖြစ်သည့် ၀န်ကြီး ဦးအုန်းမြင့် နှင့် ဦးမောင်မောင်သိမ်းတို့ အပါအ၀င် နာမည်ဆိုးဖြင့် ကျော်ကြားသည့် ပုဂ္ဂိုလ်များ၏ မိသားစုများသည် ကျောက်စိမ်းလုပ်ငန်းတွင် အဓိက လုပ်ကိုင်သူများ ဖြစ်ကြပါသည်။ ထို့အပြင် အမေရိကန်နိုင်ငံက ပိတ်ဆို့အရေးယူထားသည့် မူးယစ်ရာဇာ ဝေရှောက်ခန်သည် နာမည်ခံကုမ္ပဏီ အများအပြားမှ တဆင့် ဤလုပ်ငန်းတွင် လွှမ်းမိုးထားနိုင်သည့် အခန်းကဏ္ဍကို ယူထားပါသည်။ တချိန်တည်းမှာပင် မြန်မာစစ်တပ်ကလည်း ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းစုကြီးများမှ အမြတ်ဝေစုကြီးကြီးကို ရယူထားသည့်အပြင် ကချင်ပြည်နယ်တွင်း အရာရှိများကလည်း ခြိမ်းခြောက်ငွေညှစ်တောင်းဆိုမှုများလည်း ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် လုပ်ဆောင်နေပါသည်။
‘‘မြန်မာပြည်က ကျောက်စိမ်းလုပ်ငန်းဟာ ခေတ်သစ်သမိုင်းမှာ သဘာဝသယံဇာတတွေကို အကြီးမားဆုံး ခိုးယူလုယက်မှုကြီးလို့ ဆိုကောင်း ဆိုနိုင်ပါတယ်။ ၂၀၁၁ က စလို့ တံဆိပ်ပြောင်းတပ်ထားတဲ့ အစိုးရက သူတို့ဟာ အတိတ်က ရက်စက်တဲ့ စစ်အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်၊ ခရိုနီစနစ် နဲ့ လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှု စာမျက်နှာကို လှန်လိုက်တော့မယ်လို့ ကမ္ဘာကို ကြေညာခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့် တိုင်းပြည်ရဲ့ အဖိုးတန်ဆုံး သဘာဝအရင်းအမြစ် နဲ့ ဆွဲမက်စရာ အရည်အသွေးနဲ့ တောက်ပတဲ့ ကျောက်မျက်ရတနာ ဖြစ်တဲ့ကျောက်စိမ်းကဏ္ဍမှာတော့ လက်တွေ့အခြေအနေက တမျိုးတဖုံ ဖြစ်နေပါတယ်’’ ဟု Global Witness ၏
လေ့လာသုံးသပ်သူ ဂျူမန် ခတ်ဘာက ပြောကြားသည်။
‘‘ဒီလို အလွန် ကြီးမားပြီး ညစ်ပတ်ထားတဲ့ လုပ်ငန်းကို စစ်ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်းတွေ၊ အမေရိကန်က ပိတ်ဆို့ အရေးယူထားတဲ့ ဘိန်းရာဇာတွေ နဲ့ သေနတ်ကိုင်ထားသူတွေက ဆက်ပြီး ထိန်းချုပ်ထားကြပါတယ်။ နာမည်ခံကုမ္ပဏီတွေနဲ့ နာမည်ခံပိုင်ရှင်တွေရဲ့ နောက်ကွယ်ကနေ ဒီရေပေါ်ဆီတွေက ကြီးမားတဲ့ အမြတ်တွေကို ထုတ်ယူနေကြတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒေသခံတွေကတော့ အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်ခံနေရပြီး သူတို့ရဲ့ သဘာဝအရင်းအမြစ် အမွေအနှစ်တွေဟာ သူတို့ခြေထောက်အောက်ကနေ လုယက်ခံနေရတာက ဒီအတိုင်း ကြည့်နေရတယ်။’’
ကျောက်စိမ်းလုပ်ငန်းသည် လူထုအတွက် ကသောင်းကနင်း ဒုက္ခရောက်စေသည့်အပြင် ကျောက်စိမ်းများတူးဖော်ထုတ်ယူသည့် ကချင်ပြည်နယ်၏ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်က ည်း ထိခိုက်ပျက်စီးစေပါသည်။
ကျောက်စိမ်းတူးဖော်သည့် ပတ်ဝန်းကျင်က အခြေအနေများသည် လူကို သေဆုံးသည်အထ
အန္တရာယ်များလေ့ ရါသည်။ ထို့အပြင် မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့် ပြည့်တန်ဆာများလည်း
ပျံနှံ့ရောက်ရှိနေပါသည်။ သေနတ်ကိုင်သူများနှင့် စက်ယန္တရားများကို ဆန့်ကျင်ကန့်ကွက်သူများမှာမူ
မြေသိမ်းခံရမှုများ၊ ခြိမ်းခြောက်ခံရမှုများအပြင် အကြမ်းဖက် ခံရမှုများနှင့် ရင်ဆိုင်ရပါသည်။
ကျောက်စိမ်းလုပ်ငန်းသည် ကချင်ပြည်နယ်တွင်းရှိ လူတစ်ဦးချင်စီအတွက် တစ်နှစ်လျှင်
အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂၁,၀၀၀ တန်ဖိုးနှင့် ညီမျှသော ၀င်ငွေပမာဏကို ရှာပေးနိုင်မည့် လုပ်ငန်း
ဖြစ်သော်လည်း ဒေသခံများမှ ဤလုပ်ငန်းမှ စနစ်တကျ ဖယ်ထုတ်ခံထားရသည်။ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းများ ဆုံးရှုံးမှုနှင့် သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် အကြီးအကျယ် ပျက်စီးမှုများသည် အလွန်မတည်ငြိမ်သည
ဒေသတွင် ဆူပူမှု နှင့် မကျေနပ်မှုများကို ဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။
ကျောက်စိမ်းလုပ်ငန်းသည် ဗဟိုအစိုးရနှင့် ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် / ကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ (KIA/KIO) တို့ကြား မြန်မာနိုင်ငံ၏ အပြင်းထန်ဆုံး လက်နက်ကိုင် ပဋိပက္ခကို ဖြစ်စေသည့် အဓိက တွန်းအားတစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။ ကျောက်စိမ်းလုပ်ငန်းသည် စစ်ပွဲအတွင်း နှစ်ဘက်စလုံးအတွက် ရံပုံငွေများက ရှာဖွေပေးပြီး ယင်းစစ်ပွဲသည် ထောင်နှင့်ချီသည့် လူ့အသက်များကို ဆုံးရှုံးစေသည့်အပြင် ၂၀၁၁ ခုနှစ် စစ်ပွဲများ ပြန်ဖြစ်ပြီးကတည်းက လူ ၁၀၀,၀၀၀ ကို နေရာရွှေ့ပြောင်းစေခဲ့ပါသည်။ ယင်းအခြေအနေသည် စစ်ဗိုလ်ချုပ်များ နှင့် အစိုးရအတွင်းရှိ သဘောထား တင်းမားသူများအတွက် ပဋိပက္ခကို အချိန်ဆွဲထားရန်
နှင့် ကျောက်စိမ်းလုပ်ငန်း ပိုမိုပွင့်လင်းမျှတလာပါက ၎င်းတို့ ဆုံးရှုံးနိုင်မည့် အဖိုးတန်ပစ္စည်းများကို ကာကွယ်ထားရန် တွန်းအားများ ဖြစ်စေခဲ့ပါသည်။ ဤအစီရင်ခံစာက ထောက်ခံသည့်အချက်မှာ ကချင်ပြည်နယ်တွင်းရှိ ကျောက်စိမ်းလုပ်ငန်းမှ မည်သူတို့ စီမံခန့်ခွဲပြီး မည်သူတို့ အကျိုးအမြတ်
ဖြစ်နေကြောင်း မေးခွန်းကို ယခုပင် ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရမည်ဖြစ်ပြီး ပဋိပက္ခကို အဆုံးသတ်မည့် ပြည့်စုံသောငြိမ်းချမ်းရေးသဘောတူညီမှုတစ်ခုဆီ တက်လှမ်းသွားရန်ပင် ဖြစ်သည်။
‘‘ဒီအစီရင်ခံစာမှာ ဖော်ထုတ်လိုက်တဲ့ အခြေအနေက အလွန်ဆိုးရွားနေသလိုပဲ အပြောင်းအလဲလုပ်ဖို့
အခွင့်အလမ်းတွေက အမှန်တကယ်ရှိနေပြီး အရေးတကြီး ဆောင်ရွက်ဖို့လည်း လိုနေပါတယ်။ ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲတွေ လုပ်နေတုန်းမှာပဲ အစိုးရတွင်း ပြုပြင်ပြောင်းလဲသူတွေက ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်က သဘာဝ သယံဇာတ အရင်းအမြစ်များ ထုတ်ယူမှုဆိုင်ရာ ပွင့်လင်းမြင်သာမှု ဖော်ဆောင်ရေး အစီအစဉ် (EITI) မှာ လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တယ်။ EITI ဆိုတာက ရေနံ၊ သဘာဝဓာတ်ငွေ့နှင့် သယံဇာတ တူးဖော်ရေး လုပ်ငန်းတွေမှာ အဂတိလိုက်စားမှု နဲ့ အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုတွေ ရပ်တန့်အောင် လုပ်မယ့် နိုင်ငံတကာအစီအစဉ်ပါ။ EITI ကတော့ အပြောင်းအလဲအတွက် အများယုံကြည်လက်ခံနိုင်မယ့် မူဘောင်တစ်ခုကိုအကြုံပြု ကမ်းလှမ်း ထားပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျောက်စိမ်းလုပ်ငန်းအတွက် ဒီအကြံပြုချက်တွေကို တကယ်လို့ အာဏာပိုင်တွေ ဘက်က ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းနဲ့ အပြည့်အ၀ အရေးတကြီး မဆောင်ရွက်ဘူးဆိုရင ဒီလုပ်ငန်းစဉ်ဟာ အတုအယောင် တစ်ခုသာ ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်’’ ဟု ဂျူမန် ခတ်ဘာက ပြောသည်။
ကျောက်စိမ်းလုပ်ငန်းသည် မြန်မာနိုင်ငံနှင့်ဆိုင်သည့် အမေရိကန်၏ နိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒအပေါ် အဓိက စမ်းသပ်မှုတစ်ခုလည်း ဖြစ်ပါသည်။ အမေရိကန်သည် သဘာဝအရင်းအမြစ်များ ထုတ်ယူသည့် လုပ်ငန်းတွင် မြန်မာအစိုးရနှင့် လုပ်ငန်းဖက်တစ်ဦးဖြစ်ပြီး EITI ကို အဓိက ထောက်ခံသည့် နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်သည်။ အမေရိကန်သည် အာဏာရှင် ဦးသန်းရွှေ အုပ်ချုပ်စဉ်အတွင်းမှ စတင်ကာ ကျောက်စိမ်းကဏ္ဍအပေါ် သီးသန့်ပိတ်ဆို့မှုများလည်း လုပ်ထားပြီး စစ်အာဏာရှင်များ၏ အကျင့်ပျက်အဖွဲ့ဝင်များအပေါ်ငွေကြေးနှင့် အာဏာများ မရောက်ရှိစေရန် ဖြစ်သည်။ သို့သော် ဤအစီရင်ခံစာက ဖော်ပြနေသည်မှာ ယင်းပုဂ္ဂိုလ်များ သည်ပင်လျှင် ယနေ့ ကျောက်စိမ်းလုပ်ငန်းကို လွှမ်းမိုးချုပ်ကိုင်ထားကြပြီး မူးယစ်ဆေးဝါး လုပ်ငန်းတွင် ပါဝင်မှုကြောင့် အမေရိကန်က ပိတ်ဆို့အရေးယူထားသော အခြားနာမည်ကြီးပုဂ္ဂိုလ်များလည်း ပါဝင်ပါသည်။
Global Witness က အကြံပြုထောက်ခံသည့်အချက်မှာ အမေရိကန်အပြင် မြန်မာနိုင်ငံ၏ အခြားသောလုပ်ငန်းဖက်များအနေဖြင့် ပိတ်ဆိုမှု လျော့ချရေး နှင့် အနာဂတ်အတွက် ထောက်ပံ့ကူညီမှုများအတွက်ကျောက်စိမ်းလုပ်ငန်းတွင် ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများကို စံသတ်မှတ်ချက်တစ်ခုအနေဖြင့် ထားရှိသင့်ပါသည်။ ယင်းသို့ပြုလုပ်ရာတွင် ထိန်းချုပ်မှု နှင့် အကျိုးအမြတ်များကို ကချင်ပြည်နယ် နှင့် သာတူညီမျှ ခွဲဝေသုံးစွဲရန ဦးစားပေးသင့်ပြီး ဤလုပ်ငန်းအပေါ် မြန်မာ ပြည်သူလူထုထံသို့ တာဝန်ခံမှု ပြုရပါမည်။
‘‘ဒီအစီရင်ခံစာမှာ နာမည်တပ်ဖော်ပြထားတဲ့ လူပုဂ္ဂိုလ်တွေအပေါ် အမေရိကန်က ပိတ်ဆို့ထားတာတွေ၊ သယံဇာတအရင်းအမြစ် ထုတ်ယူမှုလုပ်ငန်း ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးတွေမှာ အမေရိကန်က ဦးဆောင် ပါဝင်နေတာတွေက ကျောက်စိမ်းလုပ်ငန်းကနေ စစ်တပ်၊ ခရိုနီ နဲ့ မူးယစ်ရာဇာတွေကို ဆွဲထုတ်ဖို့အမေရိကန်အတွက် ထူးခြားတဲ့ အခြေအနေတစ်ရပ် ဖန်တီးပေးထားသလို ဖြစ်ပါတယ်။ နိုဝင်ဘာရွေးကောက်ပွဲကနေ ထွက်လာမယ့် အစိုးရသစ်နဲ့ ပူးတွဲဆောင်ရွက်တဲ့အခါ ဒီအချက်ကို အမေရိကန်အနေနဲ့ဦးစားပေး ဆောင်ရွက်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်’’ ဟု ဂျူမန် ခတ်ဘာက ပြောကြားပါသည်။
လန်ဒန် -­ အိုလီဗာ ကော့တ်နီ +၄၄ (၀) ၇၉ ၁၂ ၅၁၇ ၁၄၇, ocourtney@globalwitness.org;;
အရှေ့တောင်အာရှ -­ ဂျူမန် ခတ်ဘာ +၉ ၅ (၀) ၉ ၉ ၇၀၄၉၈၅၃၅, jkubba@globalwitness.org, မိုက်ဒေးဗစ် Mike Davis +၈၅၅ ၇၇၉၇ ၅၀၀၂, mdavis@globalwitness.org
၁။ အစီရင်ခံစာကို ၂၃ အောက်တိုဘာ ၂၀၁၅ မှ စ၍ www.globalwitness.org/myanmarjade တွင်ရယူနိုင်ပါသည်။
၂။ ကျောက်စိမ်းလုပ်ငန်းခွင်များ၊ ယင်း၏ အကျိုးသက်ရောက်မှုများ နှင့် ဖားကန့်ရှိ နေ့စဉ်ဘ၀များ
နှင့်ပတ်သက်သည့် အရည်အသွေးမြင့် ဓာတ်ပုံများကို အသုံးပြုခွင့် ရယူလိုလျှင် မင်းဇေယျာဦး -­ minzayar88@gmail.com -­ ကို ကျေးဇူးပြု၍ ဆက်သွယ်ပါ။
၃။ ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် မြန်မာကျောက်စိမ်းကဏ္ဍ၏ ခန့်မှန်းတန်ဖိုး အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၃၁
ဘီလျံရှိသည်ဆိုသည့် တွက်ချက်မှုအခြေခံကို အစီရင်ခံစာ၏ နောက်ဆက်တွဲ ၁ တွင်
ဖော်ပြထားပါသည်။ တွက်ချက်ထားမှုကို အကျဉ်းချုပ်အားဖြင့် ဖော်ပြရလျှင် -­
a. ၂၀၁၄ ခုနှစ်အတွင်း ကျောက်စိမ်းထုတ်လုပ်မှုအကြောင်း မြန်မာအစိုးရ၏
b. ၂၀၁၄ ခုနှစ် မြန်မာ့ကျောက်မျက်ရတနာပြပွဲတွင် (ယင်းနှစ်က ကျင်းပသည့် ထိုပြပွဲသည်
နိုင်ငံတကာ ၀ယ်ယူသူများကို ရည်ရွယ်သည့် အဓိက တရားဝင် ပြပွဲဖြစ်သည်)
ရောင်းချရမှုများကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပြီး ကျောက်စိမ်းအမျိုးအစားတစ်ခုချင်းစီ၏
ပျမ်းမျှဈေးနှုန်း ခန့်မှန်းချေ နှင့် ၂၀၁၄ အောက်တိုဘာလက အထည်ကျောက်
ကျောက်စိမ်းများ (အရည်အသွေးနိမ) ပြည်တွင်း ရောင်းချရမှုတစ်ခုမှ အချက်အလက်များ
c. ၂၀၁၃ ခုနှစ်ထုတ် Harvard Ash Center/Proximity Designs အစီရင်ခံစာတွင်
ဖော်ပြသည့် ‘အရည်ကျောက်’ (အရည်အသွေးမြင)့် ၊ ‘အသားကျောက်’ (အလယ်အလတ်အရည်အသွေး)နှင့် ‘အထည်ကျောက်’ (အရည်အသွေးနိမ)့်
ကျောက်စိမ်းထုတ်လုပ်မှု အချိုးအစား ခန့်မှန်းချြေများ
အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၃၁ ဘီလျံဆိုသည်မှာ တရားဝင် ကျောက်စိမ်းထုတ်လုပ်မှု တစ်ခုတည်းမှ ခန့်မှန်းတန်ဖိုးပင် ဖြစ်သည်။ ကျောက်စိမ်းတွင်းနေရာများမှ တရားမ၀င် ထုတ်လုပ်ရောင်းချမှု တစ်စုံတစ်ရာမျှ မပါဝင်ပါ။
၄။ ၂၀၁၄ ခုနှစ်အတွင်း ကျောက်စိမ်းထုတ်လုပ်မှု ခန့်မှန်းတန်ဖိုးကို Global Witness က
နောက်တစ်နည်းဖြင့်လည်း တွက်ချက် ထုတ်ပြန်ထားပါသည်။ တရုတ်အစိုးရ၏ ၂၀၁၄ ခုနှစ်အတွက်
သွင်းကုန်အချက်အလက်များတွင် မြန်မာနိုင်ငံမှ -­ ကျောက်စိမ်း အများအပြားပါဝင်သော -­
ကျောက်မျက်များ တင်သွင်းမှု တန်ဖိုးသည် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၂.၃ ဘီလျံ ရှိပါသည်။ သို့သော် ယင်းကိန်းဂဏန်းများသည် ၂၀၁၄ ခုနှစ်အတွင်း စုစုပေါင်း ကျောက်စိမ်းထုတ်လုပ်မှု၏ သုံးပုံတစ်ပုံမျှပင မရှိပါ။ မြန်မာပြည်မှ ကျောက်စိမ်းအားလုံးနီးပါးမှာ တရုတ်နိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိသော်လည်း ကျန်ရှိသည့်
ကျောက်စိမ်းများမှာ တရုတ်အစိုးရ၏ တရားဝင် သွင်းကုန်စာရင်းတွင် ထင်ဟပ်ဖော်ပြမှု မရှိပါ။
တရုတ်နိုင်ငံ၏ ၂၀၁၄ ခုနှစ်အတွင်း သွင်းကုန်အချက်အလက်များအရ တရုတ်နိုင်ငံကို တင်သွင်းသည့်
ကျောက်စိမ်းတစ်ကီလိုဂရမ်၏ ပျမ်းမျှဈေးနှုန်း နှင့် ထိုနှစ်အတွင်း မြန်မာအစိုးရ၏ ထုတ်လုပ်မှု
ကိန်းဂဏန်းများကို တွက်ချက်ကြည့်မည်ဆလျှင် ခန့်မှန်းတန်ဖိုး အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၃၈ ဘီလျံနီးပါး
ရရှိပါသည်။ ထို့ကြောင့် ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် ကျောက်စိမ်းကဏ္ဍ၏ စုစုပေါင်းတန်ဖိုးမှာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ၃၀ ဘီလျံကျော် ရှိမည်ဟု ထပ်လောင်း ညွှန်းဆိုနေပေသည်။
Tags: ASEAN, Business and Human Rights, Crimes against humanity, Global Witness, Human Rights, Human Rights Violations, Kachin Independence Army, Kachin State, Military Dictatorship, Military Regime